Maxaa looga hadlay kulamadii beesha caalamka iyo Axmed Madoobe ku dhexmaray Kismaayo & dhambeelka loo geeyey. | WWW.REGULARNEWS.NET
Maxaa looga hadlay kulamadii beesha caalamka iyo Axmed Madoobe ku dhexmaray Kismaayo & dhambeelka loo geeyey.
Published on February 23, 2021 by admin · No Comments
Puntlandtimes (Kismaayo)-Madaxweynaha Dowlada Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo uu hogaaminayay Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr. James Swan.
Waftigaan uu hoggaaminayey Danjire James Swan waxaa qayb ka ahaa wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolás Berlanga Martínez, Safiirka Talyaaniga, wakiilo ka socda midowga Africa iyo saaxiibada dhowa ee daneeya arrimaha Soomaaliya.
Mudadadii ay socdeen kulamadaani ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee Soomaaliya, arrimaha doorashooyinka, khilaafka hareeyey fulinta heshiiskii arrimaha doorashada ee 17 September iyo sidii meel loogu wada jeensan lahaa.
Ilo xogagaal ah ayaa xaqiijiyey in Axmed Madoobe uusan weli ka soo degin meeshii uu ka taagnaa doorashada Soomaaliya gaar ahaan arrinta gobolka Gedo ee sababtay khilaafka daba dheeraaday ee doorashada Soomaaliya 2020 ilaa 2021.
Maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo wakiilada beesha caalamku kahor shirka Muqdsiho.
Madaxweynaha maamulka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ...
Sawirro-Axmed Madoobe oo ku wjahan Muqdisho & ciidankiisii oo ku qulqulaya garoonka Aadan Cadde.
Puntlandtimes (Muqdisho)-Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ...
Mid kamid ah taliyayaasha ciidanka Puntland oo xabsiga loo taxaabay iyo faahfaahin ka soo baxaysa.
Puntlandtimes (Garoowe)-Taliyaha qaybta booliska booliska gobolka Nugaal gaashaanle ...
Ciidanka xoogga Soomaaliya oo dagaal culus kaga dhawaaqay gobolka Gedo.
Abaanduulaha guutada 10-aad qeybta 43-aad ee Ciidanka dowladda ...
Malayshiyaad qabsaday xaafad katirsan Muqdisho & ciidanka DFS oo weerar ku qaaday.
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya ...
Shacabka kunool Garoowe iyo kuwa imaanaya oo awaamiir culus la duldhigay
Puntlandtimes (Garoowe)-Taliska qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa soo ...
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay kiisadkii ugu dambeeyey ee Covid19.
Wasaaradda Caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay ...
Muuse Biixi,”Shacabka Muqdisho waxay kujiraan Afduub”.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Maanta oo ...
Mas’uuliyiin katirsan Puntland oo xabsiga loo taxaabay iyo baaritaanada ciddii fududaysay weerarkii Bosaso oo bilowday.
Puntlandtimes (Boosaaso)-Warar xogagaal ah oo ay warbaahinta Puntlandtimes ...
Midowga musharixiinta oo qoraal u dusiyey wasiiro arrimo dibadeed iyo wakiilada beesha caalamka.
Midowga Musharaxiinta Soomaaliya oo ay ku jiraan Madaxweynayaal ...
Musharax Daahir M Geelle oo shaaciyey cidda dalka maamulaysa haddii la doorto.
Hoggaamiyaha Xisbiga Danqaran ahna Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud ...
Xal laga gaarey ciidankii Puntland iyo malayshiyaadkii isku horfadhiyey deegaanka Mareero ee duleedka Boosaaso.
Puntlandtomes (Boosaaso)-Maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanka Mareero ee ...
Taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya oo ka hadlay weerarkii Alshabaab iyo duulaan xubno looga diley
Puntlandtimes (Muqdisho)-Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo saacadihii lasoo ...
Dowladda Somalia oo qaaday tallaabo ka nixisay Kenya iyo guddigii badda oo dibadda u dhoofaý.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa goordhow ka ambabaxay Guddiga ...
Cabsida Covid19 ee Soomaaliya oo sii korortay iyo mid kamid ah M/goboleedyada oo laga helay…
Puntlandtimes (Muqdisho)-Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta ...